Alshabaab oo ka hadlay Dagaalkii shalay ka dhacay Magaaladda Kismaayo | Warar Sugan iyo Ciyaaraha Caalamka	Home
Waxaa la daabacay: Sunday, February 24, 2013 - 07:51:34 Waxaa la aqristay: 323 Jeer.
Alshabaab oo ka hadlay Dagaalkii shalay ka dhacay Magaaladda Kismaayo
Sheikh C/raxmaan Xudeyfi oo ah wakiilka AlShabaab ee u qaabilsan Gobalada Jubbooyinka oo la hadlaayay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ay ku fashilmeen sugidda ammaanka Magaaladda Kismaayo waxa uuna Tilmaamay in amaanka Kismaayo uu yahay mid aan la garan karin halka uu salka dhigan karo.
Sheekh C/raxmaan Xudeyfi waxa uu intaa ku daray in Ciidamadda Alshabaab ay siyaabo kala duwan ugu Sugan yihiin Gudaha Magaaladda Kismaayo isaga oona sheegay in Xiliga alshabaab ee sugida amaanka Kismaayo aan wali lagaarin.
Dhanka kale Wakiilka Alshabaab ee Gobalada Jubbooyinka waxa uu sheegay in dagaalka Kismaayo uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda ay ku fashilmeen xaqiijinta ammaanka Magaaladaasi, isaga oona arintaasi ku eedeeyay Xukuumadda Somalia oo aan iska xil-saarin amaanka Shacabka Kismaayo.
Si kastaba ha ahaatee Sheekh C/raxmaan Xudeyfi ayaa sheegay in Dagaalkaasi uu Khasaaro ka soo gaaray Shacabka Magaalada Kismaayo maadaama sida uu tilmaamay shacabka Kismaayo ay nabad ku seexan jireen